Kutora Yako Guest Blogging Tarisiro
Guest blogging inzira yakaoma uye isina kusimba iyo inofanirwa kurapwa sekutanga kwechero hukama: zvakakomba uye nehanya. Semuridzi weblog, ini handigone kukuudza kangani ini ndakatumirwa tsamba zvinotyisa, spammy maemail. Blogs, sehukama, inotora yakawanda yekuedza uye ingangodaro muenzi blogger haifanire kuitora senge isina basa maitiro.
Heano manomwe echokwadi moto mazano ekufambidzana evashanyi maposta kudare blogger:
1. Ziva zvaunogona mutambo
Usati wabombona blogger ine yako chinyorwa mapaki kana kutumira, tanga waziva blogger.
Verenga yavo Nezve peji, dzidza zita ravo, vatevere pa Twitter, uye verenga mashoma mablog mablog kuti udzidze yavo blog blog izwi.
Kana iwe uchinyatsoda kuita fungidziro, siya zvirevo pane zvavanotumira, pindura kuma tweets avo, goverana zvinyorwa zvavo zvaunofarira netiweki yako.
Funga nezve mashoma ezvinyorwa mazano ayo anoshanda kune iyo blog. Chii chinoshaikwa kubva kune ino blog? Chii chaizoshanda? Tarisa uone zviri kuitika muniche yavo uye zviri kutaurwa nevanhu pane vezvenhau.
2. Tanga wafamba
Ok, wavaka kuvimba neako blogger uye wagadzirira kutora hukama hwako padanho rinotevera. Iwe unoziva kuti ino blog ichave yakakwana iwe uye iwe une zano reizvo iwe zvaunoda kukanda kana kuendesa kune blogger. Ino ndiyo nguva yekuita kufamba kwako.
Mushure mekunge maverenga nhungamiro dzeblogger, bata kwavari kuburikidza nesarudzo yavo yavanofarira. Kana vakasanyora nhungamiro kana nzira yakasarudzika yekutaurirana pane yavo blog, vabvunze!
Paunenge uchitaura, iva munhu anonzwisisika-iva iwe! Ita kuti vazive kuti iwe ndiwe ani uye nei urikutaura navo-kune vaenzi posvo!
3. Iva munyoro
Sekungovhura kwaunoita mukova kumukadzi, mabloggi anodawo kufarirwa.
Ita kuti zvive nyore kune blogger. Kamwe kana chinyorwa chako chatumirwa (zvinoenderana nemazano avo), wedzera mapikicha uye zadza chero ruzivo rweWordPress. Izvi zvinogona kusanganisira ma tag, inoratidzwa mufananidzo uye SEO zvinodiwa.
Ive neshuwa yekukweretesa chero mapikicha akashandiswa uye uine zero girama kana chiperengo zvikanganiso. Izvi zvingaite sezviri pachena, asi zvekutanga zvionekwe ndizvo zvese kana zvasvika kune hukama uye muenzi blogging.
4. Usave Clinger
Kana iwe ukaendesa tsamba yako uye ikasakwira kumusoro iwoyo iwoyo kana kunyangwe zuva rinotevera, usanetsa muridzi weblog - sezvausinga daire uchidzokorora kufona kana kutumira meseji zuva rako paunenge uchitanga kuvaka hukama !
Mushure memazuva matatu kusvika manomwe, vatumire isiri-inotyisa cheki-mu tweet kana email. Usaita hutsinye!
Tarisa kumusoro paiyo blog kana Twitter account kuti uone ichangoburwa chiitiko; hapana mitsva inogadziridza inogona kureva kuti blogger yakabatikana nezvimwe zvinhu.
5. Dada nehukama hwako hutsva
Paunoirova nerombo murudo, vazhinji vedu tinoda kudaidzira tiri pamusoro pemba. Bata chinyorwa chako chakaburitswa nechido chimwe chete.
Kamwe kana yako posvo yaenda kunorarama, goverana nemasocial network. Blogger vanofarira kuwona zvakatumirwa zvichigovaniswa munharaunda! Kuwana yakanakisa yemhando blog positi yakafanana nedanho rakanaka uye masocial share ndiwo creme br islée!
6. Usatora mukana
Chero ani zvake aneta nevaridzi vebloggi vachida muripo wemapositi evashanyi? Iwe unoreva, ini ndiri kukupa iwe mhando yakanaka, inoenderana, inoteedzera zvemukati uye iwe unoda kuti ndikubhadhare iwe?
Edza nemutsa kutaurira muridzi webhulogi iwe kuti haukwanise kuvabhadhara, asi iwe unenge uchifara kudzosera rupo rwavo rwekuburitsa yako posvo nekuvabatanidza navo nevamwe mabloggi uye nekudyidzana kugovana chinyorwa chako.
Kazhinji yenguva, muridzi weblog anozove nemutsa zvakakwana kuti ubvumire; ivo vanongoda kuziva kuti ivo vari kuwana chimwe chinhu kubva muhukama uye chisiri kushandiswa!
7. Shanda wakanangana nehukama hurefu
Kudanana, senge muenzi kublogi, kunogona kunetesa; paunowana kukwana kwakaringana, isa basa mukuchengetedza muyeni kutumira murazvo uri mupenyu.
Ramba uchisangana ne blogger. Enderera kunyorera ivo, email ivo, tweet uye ubatanidze navo nevamwe blogger.
Guest kutumira kuri pamusoro kuvaka hukama nevanhu online uye kuwana pachena. Iwe hauzive, ivo vangatokukurudzira kana kukuzivisa iwe kune vamwe vane hushamwari varidzi veblog.
Tags: Content Marketingmuenzi blogguest postevanhu vezvenhau
Cassie Grey iri Tsvaga Media Networker padigitalkukosha uye akashanda muInternet kushambadzira kwemakore mashanu. Kana iye asiri kubloga kana kugara azvino nekutengesa uye enhau enhau mafambiro, anofarira kushandisa nguva yake panze achifamba, kuchovha bhasikoro uye kukwasva ngarava. Mutevera pa Twitter @cassaleenie.
Kuvandudzwa kweIngwaru Kuzvishandira-Iwe
Chii Chinoshanda muMobile Rich Media Kushambadzira?
Gumiguru 3, 2012 pa 3:00 AM
hI CAss, iwe wakaroverera iyeye. Icho chidimbu chakanaka. Pakati pemazano aya ini handina kumbofunga kuti ndakanga ndapedza zano rimwe chete, pandinoyedza kuita muenzi kublogi kana kungo blogga zvangu ndinochengeta tsoka dzangu pasi uye kuzvichengeta ndakadzikama. Ndatenda zvakare.